"Xogahaya Xisbiga Waddani ma imikuun buu ku soo baraarugay arimaha uu ku dhaliilay xukumad Kulmiye iyo Madaxweyne Muuse Biixi:- Wariye Cabdilaahi Maxamed - Haldoor News | Haldoor News
“Xogahaya Xisbiga Waddani ma imikuun buu ku soo baraarugay arimaha uu ku dhaliilay xukumad Kulmiye iyo Madaxweyne Muuse Biixi:- Wariye Cabdilaahi Maxamed
July 17, 2019 - Written by admin
Xogahaya Xisbiga Waddani ma imikuun buu ku soo baraarugay arimaha uu ku dhaliilay xukumad Kulmiye iyo Madaxweyne Muuse Biixi, sida safarkii Guinea iyo shirkii fashilmay ee Nairobi ee hay’adu ku doonaysay in ay u qabato JSL iyo DFS sidii wada hadalo loo bilaabi laahaa?
Mida kale Xoghayaha Arimahad Dibada Xsibiga Waddani, Faadumo Saciid iyadoo magaa xibiga ku hadlaysa sowtii hambalyeysay safarkii madaxweynaha ee Guinea, Gudoomiyaha ku-meelgaadhka ee xisbiga Waddani, C/qaadr Jirde isna muujiyey taageerada socdaalka, kana qayb galay soo dhaweyntii madaxweynaha!
Inkastoo in xukumada la dhaliilaa ay tahay waxa aynu ka filano xisbi mucaarid ah, oo ay shaqadodu tahayba in ay inaga hurgufaan wixii ay xukumadu inoo hoosaasinayso ama inagu majaro habaabinayso, haddana waa maxay barqo baraarugan Xoghaya Xisbiga Waddani, Khadar Abdi, mase loo qaadan karaa in xoghaya iyo Faadumo Saciid ay isku aragti ka ahayn socdaalka madaxweynaha?
Anigu markaan isku geeyo warar hoose oo iga soo gaadhaya xubno muhiim ah oo xisbiga Waddani iyo kala hadalkan, waliba dhaliilaha iyo fasiraada xoghayaha oo ah mid goor dambe soo dhacday iyo hambalyadii qadinayd ee Faadumo Saciid, waxa ay astaan u tahay in uu jiro dil dilaac hoose oo ku salaysan sidii Xisbiga Waddani arimaha oogan u wajihi lahaa.
Waxa la ii sheegay in xisbiga Waddani, waliba inta hogaanka sare ay sida biyaha meel hoose iska hirdiyayaan.
Wali ma hayno mucaarid iyo muxaafid xukumadeed oo aynu kala rumaysano – dhinac waliba dhankiisa ayuu u huursan yahay.
Ma muuqdo hanaankii aynu hore u naqaanay xilyadii hore ee mucaaridka iyo xukumada ay ku mucaaridka yihiin.
Wax kala miiran ma aragno dhan walba!